Ihe omimi nke ihe omuma
Onye ntanetị weebụ bụ ihe omume nke na-agagharị na Intaneti iji chọta isi dị ka ihe arụ edemede. Ọ na-achọ isiokwu, njikọ na ọdịnaya di iche iche na ibe weebụ. N'ezie, ntaneti weebụ na-elekwasị anya n'ịchọta ozi bara uru maka ndị ọrụ ya n'elu ụgbụ.
Olee otú Web Crawler Na-arụ ọrụ
Otu ntanetị weebụ chọtara ibe na weebụ ma wezie ha na akpaghị aka iji kwado ụfọdụ ajụjụ. Ndị na-arụ ọrụ na weebụ na-arụ ọrụ niile n'okpuru aha dị iche iche, dị ka ígwè ọrụ robots na ndị na-edekọ aha. Ndị nyocha weebụ mgbe ọ bụla na-ede ụdị ajụjụ ọchụchọ, ndị a nwere ike nyochaa ibe weebụ niile dị mkpa iji chọpụta kpọmkwem data. Mgbe ndị crawlers na-aga na ibe weebụ, ha nwekwara ike ịchọ maka ibe ndị ọzọ nke kwesịrị ịga. N'ihi ya, ntanetị weebụ nwere ike jikọta na saịtị ọhụrụ dị iche iche, detuo ndetu nke mgbanwe ndị dị na saịtị ndị dị na ha na ha nwekwara ike ịchọpụta njikọ ọ bụla nwụrụ anwụ. N'ụzọ dị otú a, ndị ntanetị weebụ nwere ike ịbanye site na ibe weebụ dị iche iche iji chịkọta ihe ndị ahịa ha chọrọ. Ọzọkwa, ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nwere nhọrọ iji kpebie nke nke ibe ha chọrọ igbochi.
Data Mining: Usoro dị irè
Ngwuputa data nwere ike inyere ndị ọrụ crawlers weebụ aka wepu ozi dị iche iche site na ọdụ data site na Ịntanetị. Ọrụ a na-azọpụta ha oge na ume, ya mere ha nwere ike ịrụ ọrụ ndị ọzọ maka ụlọ ọrụ ha. Enwere ụfọdụ ngwaọrụ maka ntinye data nke nwere ike nyochaa omume ndị gara aga nke ndị ọrụ ụfọdụ ma ha nwekwara ike ịkọwapụta ọnọdụ ndị nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka ịga nke ọma. Taa, ntinye data nwere ike ịchọta ụdị data dị iche iche na Intaneti nke ọbụna ndị ọkachamara nwere ike ịda mbà. Ngwuputa data bu usoro di oke egwu ma di egwu. N'oge usoro mmegharị, ndị na-enyocha weebụ ga-emeri ọtụtụ njehie na peeji nke, yana ụfọdụ data dị n'asụsụ dị iche iche na akara akara aka.
Wepụ data site na ihe oyiyi
Ọtụtụ ụlọ ọrụ taa na-achọpụtakwa ihe oyiyi maka ịzụ ahịa ahịa, ha na-echekwa ha iji nye ndị ka mma maka ndị ahịa ha. Site n'iji ntaneti weebụ, ha nwere ike ịhụ ihe oyiyi nke ngwaahịa ndị ahụ, yana ngwaahịa ndị yiri ya na ahịa.
Mkpa nke Crawlers Web
Taa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji crawlers weebụ iji nweta ọnụnọ dị ike n'ịntanetị, site na ikpokọta data dị iche iche, dịka ọnụahịa nke ngwaahịa ndị yiri ya, nyochaa , kọntaktị kọntaktị na ọtụtụ ihe oyiyi. Ihe oyiyi ha na-ezukọta nwere ike inyere ha aka imeziwanye ọrụ ha ma nyefee ngwaahịa na ọnụahịa karịa ndị na-asọmpi ha. N'ihi ya, ha nwere ike ime ka ụlọ ọrụ ha dịkwuo mma ma nwekwuo ọganihu. Ya mere, ntanetị weebụ nwere ike ịbụ enyemaka dị ịtụnanya maka azụmahịa, dị ka ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na blọọgụ ndị ọzọ, nke chọrọ ịba uru na ịga nke ọma. Ulo oru di iche iche n'uwa dum na-acho ichoputa uzo kachasi nma na ndi bara uru iji merie ndi n'egba ha ma nweta ndi ahia karia.Igwe ntanetị weebụ nwere ike inyere ha aka inwe ihe ịga nke ọma, site n'ịdị mma nke ngwaahịa ha, nwee ọnụ ahịa ndị ọzọ ma nyekwuo ya Source .